Global Voices teny Malagasy » Avy ao Syria mankany amin’izao tontolo izao: Fanamarihana momba ny jadona, ny ady sy ny fahadisoam-panantenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Oktobra 2019 5:31 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vonjy Voina, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Sary avy amin'iI Carabo Spain  avy amin'ny Pixabay. 
Avy amin'i Jihad Eddin Ramadan
Mifototra amin'ny zava-misy tena nisy sy tantara marina momba ny vahoaka Syriana, anisan'izany ireo namana sy havan'ny mpanoratra, mampiseho ny lafiny maro amin'ny voina Syriana ireo Fanamarihana ireo ary mampiseho mazava ny faharefoan'ny fiainana Syriana. Nandefa hafatra mazava sy mafy izy ireo fa mendrika ny hiaina am-pilaminana, am-pahamendrehana ary am-pahalalahana – tahaka ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao ny Syriana. Nadikan'i Tesbih Habbal ny lahatsoratra teny Arabo tany am-boalohany.
‘Ankizy aho. Mipetraka miaraka amin'ny rahalahiko fito ao amin'ny trano iray mampalahelo aho. Saingy tiako ny tranonay. Paradisa izany; fiarovana tsara ho ahy. Avy eo, tamin'ny alina maizimaizina, nisy bibidia manana hoditra olombelona niditra an-keriny tao. Novonoin'izy ireo niaraka tamin'ny rahalahiko aho; ry dada, nanao izany fotsiny izy ireo satria niteny ianao hoe “tsia”
‘Ankizy aho, mianatra amin'ny sekoly ambaratonga fototra any atsinanana, andrefana, atsimo, avaratr'i Syria – na eo anelanelan'ireo. Tsy maninona izay sekoly misy ahy. Nanonofy aho indray mandeha fa lasa mpampianatra. Nanjary rava ny fianarako, sy ny nofinofiko koa. Nanjary nifindra toerana tampoka aho, tsy misy nofinofy, tao amin'ny toby iray.’
Zaza manelingelina aho. Mangataka amin'ny reniko isan'andro amin'ny Ramadany aho mba hividy akanjo sy kiraro vaovao fanao amin'ny Eid. Nijanona ihany ny fanelingelenako rehefa niezaka nanandrana ny akanjo sy kiraro vaovao aho. Mijery ny reniko manafina ny akanjoko vaovao ao anatin'ny lalimoara aho, nafeniny izy ireo hiandrasana ny fahatongavan'ny Eid. Avy eo, tao anatin'ny fotoana fohy, nisy balafomanga nandalo ny vatako. Mba tsy handrenesana ny tabatabako, napetrak'i Neny teo am-pasako ny akanjoko sy ny kiraroko Eid vaovao. ‘
‘Vetivety aho dia antitra, raha nijery azy ireo namono ny raiko sy ny rahalahiko roa teo amin'ny toeram-pisavana aho. Maniry aho mba tsy hamela ahy ho velona izy ireo, mandehandeha irery eny amin'ny lalana mangatsiaka. Andriamanitra ô, fa maninona aho no tsy novonoin'izy ireo! Noho izany dia tsy voampanga ho adala intsony aho… ‘
‘Mpanakanto aho. Mitendry lokanga. Nanoratra ny hiran'ny hatezerana rehetra ho an'ny mpifanolobodirindrina tiako. Namboly masom-panantenana ao am-pon'ny olona aho. Ary niady tamin'ny tononkirako, ny fahantrako sy ny fahafatesako, mandra-panaovan'ny fanahiko dia am-pilaminana any an-danitra. ‘
‘Mbola zazavavy aho, saingy nataon'ny mpanolana ahy ho vehivavy lehibe – teo amin'ny faha-valo taona. Nanafika ny vatako tao amin'ny efitrano kely tao am-pianarana izy. Efitra falehako mividy vatomamy izany. Nomeny vatomamy sy frity aho ary nilaza tamiko izy hoe: “Aza manahy, afaka maka ireo maimaimpoana ianao.” ‘
‘Zazalahy tsara tarehy aho. Nanana fitaovam-piadiana aho mba hiaro ny fireneko. Fantatro ny fahavaloko sy ny namako. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe hovonoin'ny rahalahiko sy ny namana niray toby tamiko. Raha nandevina ahy tao amin'ny Fasan'ny Maritiora teo akaikin'ny tanànako izy ireo, dia nahita ny tavan'ny mpamono ahy aho. Nitomany izy; rahalahiko izy; nofoko sy ràko madiodio. Namadika ahy izy, noho ny dolara ny vitsivitsy. ‘
‘Raim-pianakaviana 50 taona mahery aho. Tsy manana fianakaviana na havana tavela eto aho. Matetika aho no mahatsiaro ny zanako lahy izay nandositra niampita ranomasina. Miresaka aminy isan'andro, am-pahalemem-panahy sy amim-pitiavana aho, rehefa mipetraka amin'ny dabilion'ny zaridainam-panjakana. Nihira taminy aho: “Te hahita anao isan'andro aho, ry malalako.”
Ankizy aho. Nentin'ny reniko tao anaty sambo simba aho mba hamonjy ny aiko. Namoy ny ainy avokoa ny ray aman-dreniko, ny mpandeha tao amin'ilay sambon-dranomasina (balam), sy ny olon-kafa rehetra. Nentin'ny onja niverina tany amin'ny morontsiraka aho, tsy lavitry ny toerana nanondranana anay. Nitsoaka ilay mpanondrana olona. Nalahelo ahy ny tontolo iray manontolo, saingy vetivety dia rava ny tantarako; ny hany sisa tavela dia ny sarin'ny zaza nilentika antsoina hoe “Eilan” novonoin'ny olona tsy mifaditrovana. ‘
‘Poeta marefo aho. Nogadrain'izy ireo tao anaty lakaly maizim-pito aho satria tsy nety nanome voninahitra ny “tompo.” Nampijaly ahy izy ireo, nandoro ahy tamin'ny herinaratra, namoaka ny masoko ary nanolana ahy. Rehefa navotsotra aho, dia tsy afaka nahita afa-tsy tamin’ ny foko sy ny fahatsapako. Toy ny olona tsy voajanahary, tsy misy dikany sy adala no fahitan'ny olona ahy. ‘
‘Zaza tsy manan-tsiny aho. Nosintonin'izy ireo hiala ny korontan-trano rava aho ary nalain'izy ireo sary. Tsy fantatro hoe iza no nanimba ny trano teo an-dohako. Tsy fantatro hoe iza no namonjy ahy, ary tsy haiko ny mamitaka na mihetsika. Fa maninona no nataonao kintana tamin'ny sarimihetsika vetivety loatra aho?!
‘Tanim-barimbazaha aho, mifofofofo amin'ny rivotra, vonona hojinjaina. Miandry ny mpamboliko aho hanapaka ny variko amin'ny antsim-pijinjany ambony. Hitako ny salohim-bariko lasa mofo ho an'ny noana. Saingy nodoran'ireo olon-doza nandritra ny fotoanan'ny fijinjana aho. Nilaza izy ireo fa nisy olona nanipy sigara nandoro ny tanimboly rehetra ao amin'ny fireneko. ‘
‘Izaho no lohan'i Abu al-‘Ala’ al-Ma'arri, tempolin'i Bel, ary ny sarivongan'i Ibrahim Hanano mitaingin-tsoavaly. Naringan'ny olona izay tonga eran'izao tontolo izao aho; olona izay nipoitra tamin'ny sora-baventy taloha sy ny fandrombahantany taloha. Nasandratr'izy ireo tamin'ny faharavako ireo sora-baventy mainty. Nopotehin'izy ireo ny tempoly sy ny tsangambato ary namono ny soavaly izy ireo, nilaza fa sampy ivavahana ireo fa tsy Andriamanitra.’
‘Mpanakanto mpaneso aho. Nandoko sarina mpitarika masiaka aho. Nofy ratsy izany. Nodoran'izy ireo ny hosodokoko ary nalain'izy ireo ny peniko sy ny borosy fandokoako. Nodarohan-dry zareo aho ary tapaka ny rantsan-tanako ary nilaza izy ireo hoe: “Ity no sazy omena ny olona manaratsy ny mpitarikantsika tsara fanahy indrindra. Tsy mahandry intsony ankehitriny ilay mpitarika ary fotoana izao hanajanonanao ny fanaovana ny hosodokony, fa raha tsy izany dia hofafanay tsy ho eto ambonin'ny tany ianao.
‘Syriana nijoro nanohitra izao tontolo izao aho ary niantsoantso hoe: Olombelona aho fa tsy biby. Saingy inona no azoko avy eo? Lahateny avy amin'i Ban Ki-moon “tena sahiran-tsaina tanteraka, ary sioka malefaka avy amin'i Trump:” Eny tokoa! (Al-Assad) no biby—fa tsy ianao. ”’
‘Mpanamboatra mofo aho. Manamboatra mofo aho ary mahandro fromazy sy tarta zaatar. Manonofy voasary makirana na oliva an'i Yafawi aho. Nataon'izy ireo fahirano tao amin'ny “toby Al-Yarmouk” aho ary nesorin'izy ireo tamiko ny varimbazaha, ny lafarinina sy ny mofo. Nahantona teo amin'ny fefin'ny fahirano ny mofo mba hisamborana ahy, toy ny mihaza totozy amin'ny sombi-mofo kely izy ireo. Isaky ny noana aho ary niezaka nandrava ny fahirano, dia nitifitra ahy izy ireo talohan'ny nahatratrarako ny mofo. ‘
‘Syriana avy any rehetra any aho. Nijoro teo amin'ny tavan'ny jadona aho. Notafihin'izao rehetra izao aho tamin'ny anaran'ny fanaovana ho resy ny fampihorohoroana na dia izaho aza no lasibatr'izany voalohany. Nomelohin'ny firenena sy ny fivavahana rehetra aho. Saingy tsy handresy ahy ianareo. Tsy hamparefo ny fahavononako na hanakana ahy tsy hanonofy ampitso tsara kokoa—izay hiposahan'ny masoandron'ny fahamarinana ianareo. ‘
Mpisolovava sy mpanoratra Syriana avy ao Aleppo, monina ho mpitsoa-ponenana ankehitriny ao Vienna i Jihad Eddin Ramadan. Tesbih Habbal kosa dia Syriana mpikaroka sy mpamoaka lahatsoratra, monina ao amin'ny Oniversiten'i Chicago amin'izao fotoana izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/09/143738/